बामदेवमाथि किन कारबाही भएको थियो ? – Karnalisandesh
बामदेवमाथि किन कारबाही भएको थियो ?
प्रकाशित मितिः १३ असार २०७७, शनिबार १९:३६ June 27, 2020
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले आफूलाई न्याय दिन पार्टी नेतृत्वसामू माग गरेका छन्।
यसका लागि महाकाली सन्धिलाई लिएर आफूमाथि कारबाही गर्नु ‘गल्ती थियो’ भनेर पार्टी भन्नुपर्ने उनको माग छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गौतमले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्ने क्रममा आफूहरुले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्दा कारबाही गरेको र त्यही कारण पार्टी फुटेको स्मरण गराए। उनले भने, त्यसबेला मलाई कारबाही गरेर गल्ती गरेको भनेर पार्टी न्याय दिओस्।’
नेताहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भए । पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालसँगै नेता केपी ओली महाकाली सन्धिको पक्षमा भए । तर गौतमले सन्धिलाई ‘राष्ट्रघात’ को संज्ञा दिए । तत्कालीन एमालेको २९ औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मतदान भयो र एक मतको अन्तरले सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र४ असोज २०५३ मा एमालेको समर्थनमा संसदले पनि यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
तर पार्टीको हृवीप उल्लंघन गर्दै गौतम पक्षका केही नेताले मतदान गरेनन् । यही विवाद चर्किँदै जाँदा एमालेले गौतममाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि ०५४ साल फागुन २१ गते एमाले फुट्यो । सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतको ससमूहले नेकपा माले बनायो पार्टीको अध्यक्ष सहाना प्रधान भइन् भने गौतम महासचिव बनेका थिए ।
अरु नेताहरुले के भने ?
अनलाईन खबरका अनुसार बैठकमा गौतमसहित २१ नेताले बोलेका थिए । सबैले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । साथै अब कूटनीतिक सम्वादमार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तर मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझीले भने अतिक्रमित भूमि नछाडे भारतसँग लड्नुपर्ने धारणा राखेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले अनलाइाखबरलाई बताएका छन्।
स्थायी कमिटीको अर्को बैठक १६ गते बस्नेछ । कसीमा विवादबारे समिक्षापछि कोभिड(१९ नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारको भूमिकाबारे छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि अरु एजेण्डामा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ’ उनले भने ।